Muqdisho oo saaka maydka meel la marsiiyo la la'yahay | Keydmedia
Muqdisho oo saaka maydka meel la marsiiyo la la’yahay
Marxuum ku geeriyooday xaafad ku taallo magaalada Muqdisho ayaa saaka meydkiisa la la'yahay meel la marsiiyo, kadib markii la xiray waddooyinka Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shacabka Muqdisho ayaa saaka ku waabariistay xaalaad nooc kale ah, waxaana inta badan la xiray waddooyinka halbolaha u ah caasimadda iyo isu socoka bulshada.
Shacabka ayaa ah saaka kuwa lugtooda maalaya, waxaana waddooyinka la soo dhoobay ciidamo tiro badan, kuwaas oo waddada ku jartay gaadiidka ciidanka iyo dhagxaan waaweyn oo aan laga gudbi karin.
Dhinaca kale maydka marxuum xalay ku geeriyooday xaafad ku taallo Muqdisho ayaa saaka meel la marsiiyo la waayay, waxaana Muuqaal laga soo soo duubay dadweyne garbaha ku sida maydka lagu baahiyay baraha Bulshada, iyadoona bulsho badan oo ka caroodeen arintaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in sababta loo xiray waddooyinka ay tahay safar ay maanta Muqdisho ku imaanayaan hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka caga jiidsan siyaasadda Farmaajo, balse hadda dabac muujinaya.
Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyene Farmaajo oo looga bartay in ay xirato waddooyinka xilliyada ay imaanayaan waduuf caalamiga ah ayaa saaka la yaab noqotay in hogaamiyeyaal maamul goboleed waddo loo xiro, shacabkana lugey lagu qasbo.